Ukutya okunobungozi kwimpilo
Amantombazana athabatha amanyathelo angengozini ekulwa neekhilogram ezingaphezulu. Ukutya okungeyomfuneko kunye nokungalunganga kungabangela ingozi, oko kunokubangela unyango lwenkqubo yokutya. Ngoko ke, ngaphambi kokulungiswa kokutya, kufuneka udibane nodokotela. Kwabo abalandela isisu, siya kukuxelela ngokutya, kuyingozi kwimpilo.
Oku kutya kukuphupha ngezinyo ezinomsoco, kubandakanya ezinye i-chocolates kunye neesekese, zidliwa inani elithile kunye namaxesha amaninzi ngemini, ngelixa zihlambulukile ngetiyi ezingenasiphunga. Kwaye kubonakala ngathi iphupha lizalisekile, unako ukulahlekelwa isisindo uze udle iiswidi, kodwa ngaphantsi kwesi sikhulu.
Inani elikhulu le-carbohydrates engena emzimbeni lingakhokelela ekudleni kunye neentloko. Ngenxa yokutya okunjalo, i-3 kg ilahlekile, kodwa ngaba ngaba amaxhoba afanelekileyo iingxaki ezilandelayo? Olu lumnandi luya kuba luvuyo kwaye luza kuzisa kunye namakhilogremu angaphezulu.
Amafutha emzimbeni akhiwa kwi-carbohydrates, amantombazana amaninzi asebenzisa iiprotheyini zokutya ukuze anciphise inani lawo. Ungabandakanyi kwimifuno yokutya, iziqhamo, iimveliso zepuphu, udla ikakhulu inyama kunye neentlanzi. Lo thintelo unceda ukwakha ubunzima be-muscle kunye nokunciphisa umzimba, kodwa akusiyo yonke into engekho.
Umzimba kufuneka uzalise zonke izinto-kunye neeprotheni, kunye ne-carbohydrates, kunye namafutha, ukuba azingangeni nokutya, ngoko umzimba uyazama ukukhipha kwizinto ezondliwayo. Emva koko iiprotheni ezangena emzimbeni ziguqulwa zibe yi-carbohydrate, kodwa ingozi ngokwayo kukuba ngexesha lokuguqulwa kweprotheni, iimveliso zokucoca ezinobungozi kwimpilo zikhutshwa, ziyingozi. Ezi zinto zichaphazela kakhulu imetabolism kunye neentso. Uyakulawula ukulahlekelwa isisindo, kodwa awuyi kukwazi ukunandipha, oku akuyi kubanele. Yenza nje i-steak efanelekileyo.
Umgaqo we-mono-yokutya kukusetyenziswa kwemveliso ethile kuphela. Izidlo ezidumile kunye nemveliso enye - i-apula, i-kefir, i-buckwheat. Ezi ngxaki zentlungu, ukuze ufezekise umphumo ofunwayo, kufuneka uhlupheke ngaphezu kweveki enye, kwaye imiphumo ayikukulinda ixesha elide. Ngenxa yokutya, umzimba awunanto yokusebenza, ulinganiselwe kwizondlo. Ukongeza kwimveliso, i-mono-diet iyanqanda ukusebenzisa ityuwa. Ngale ndlela yokutya okunomzimba emzimbeni, ukwanda kwezakhi zomntu ngamnye, kungenxa yoko imetabolism emzimbeni kunye nokulinganiswa kweetyuwa kuphazamiseka. Xa i-mono-diet ephela, iikhilogram ezilahlekileyo zibuyiselwa, zihamba nazo enye ikhilogram ezimbini. Ngoko ke, ukuba uya kuhlambulula umzimba, kungcono wenze usuku luhambe ngeveki, luya kwenza okulungileyo.
Oku akuthethi ukuba unako ukusela kuphela umbane, zonke ukutya kufuneka zithathwe ngendlela yefayili. Imenyu yale yokutya yilezi, imifuno egciniweyo, iisobho ze-cream. Ingozi yale yokutya kukuba inqanda umsebenzi wezintshatshu kwaye ngoko-ke umthamo wesifo emzimbeni uphazamiseka. Umathumbu udinga ukutya okuqinileyo, kusebenze ukukhululwa kwama-enzyme, baqala umsebenzi wabo.
Ngenxa yoko unokugqitywa ukuba kufuneka uphuze amanzi amaninzi, udle ngokuqhelekileyo, konke oku kuyimfuneko umzimba, ngezinye izihlandlo unokuziphathela kwii-cocktails ezimnandi.
Indlela eyingozi yokulahlekelwa isisindo kukutya okusebenzisa amayeza. Njengezithembiso zentengiso - ungasusa ama-kilogramgram ngeenyanga, kodwa abazithethi ukuba yintoni inzakalo eyokwenziwa emzimbeni ngalezi zinguqulelo. Awukwazi ukuzimela ngokuzimeleyo ngamachiza, unokuzilimaza ngokwakho.
Emva kokuxoxisana nogqirha kufuneka enze iinguqu zokukhawuleza kwisondlo, ugqirha uya kukuxelela indlela yokuphepha kunye nokuchanekileyo ngokujongana nobunzima obukhulu.
Kutheni ukungabi nesisindo kunciphisa ukutya okunzima?
Indlela yokutya ngokufanelekileyo xa wenza ukufaneleka
Umtshato wothando nomtshato wokulungelelanisa
Ukukhetha iimveliso zobisi kumntwana wakho
Indoda engatshatanga, indlela yokwenza ingcuka yodwa?